IAnchor yothando ngaseLwandle
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguJodi
Indlu yabalobi be-Quaint 1800s iguqulwe yaba likhaya elihle elinamagumbi amathathu okulala elijonge ulwandle. Phumla kwidesika kwaye ubukele iminenga idlala ebhayi. Hamba uye esibukweni okanye uqokelele ubuncwane baselwandle ecaleni konxweme lwelitye elincinane. Amava ngembali noxolo.
Nokuba uhlala iveki okanye iintsuku ezimbalwa, uya kufumana izibonelelo ezongezelelekileyo ezimangalisayo, ezinje ngolwandle olunamatye iiyadi ezingama-50 ezantsi kwendlela, imbono ye-wharf yedolophu, kunye nokufikelela ekuthengeni imizuzu eli-15 phezulu okanye ezantsi ebheyi.
Iindawo ezininzi ezikhangayo zikwindawo ngaphakathi kwemizuzu eyi-15-30 yokuqhuba njengeemyuziyam, iindlela zembali, imiboniso yobugcisa, iilwandle ezisanti, ukuqubha, iidolophu ezidumileyo zaseBrigus kunye neCupids, kwaye indlu imalunga neyure ukusuka eSt.
40" HDTV ene-intambo yepremiyamu, izitishi zeTV eziqhelekileyo
4.77 · Izimvo eziyi-143
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Upper Island Cove